Etazonia sy Madagasikara : feno 150 taona ny fifandraisana ara-barotra | NewsMada
Etazonia sy Madagasikara : feno 150 taona ny fifandraisana ara-barotra
Feno 150 taona, ny 14 febroary teo, ny nanaovan-tsonia ny fifanarahana ara-barotra sy ny firahalahiana ary ny fandriampahalemana eo amin’i Etazonia sy i Madagasikara. Niantombohan’izany ny sehatry ny varotra, toy ny ankamaroan’ny fifandraisana eo amina firenena roa samy hafa. Ny taona 1830, efa nisy tranombarotra amerikanina maromaro nanana solontena nipetraka tany amin’ny morontsiraka, indrindra ny tany Mahajanga sy Toamasina. Ny taona 1867, natao sonia ny fifanarahana ara-barotra teo amin’i Etazonia sy i Madagasikara, ka nisolo tena ny governemanta amerikanina tamin’izany i John P. Finkelmeier. Niroborobo ny fifanakalozana, teo antenantenan’ny taonjato faha-19, nitarika ho amin’ny fifandraisana ofisialy eo amin’ny firenena roa tonta.
Nisantaran’ny ambasadaoro amerikanina, Robert T. Yamate, ny fankalazana io daty manan-tantara io ny fiarahana miombom-po amin’ireo mpiasa malagasy ao amin’ny masoivoho amerikanina, ny 14 febroary teo. Ireo mpiasa malagasy izay afaka manome aina sy rohy mampifamatotra ny firenena roa tonta. Nankasitraka ny ambasadaoro amerikanina ny filohan’ny fikambanan’ny mpiasa malagasy, Ramiandrisoa Hery Zo, ao amin’ny masoivoho, nandritra ny lahateny fohy nataony. Manamafy ny fifandraisana diplaomatika eo amin’i Etazonia sy i Madagasikara ireo mpiasa malagasy ireo.
Ny ambasadaoro Robert T. Yamate kosa, nanamafy fa santatra ny fankalazana ihany iny fotoana iny. Hisy ireo hetsika samihafa mandritra ity taona ity hoentina hanamarihana izany faha-150 taona eo amin’ny fifandraisana ara-barotra izany. Tsy ho diso anjara i Toamasina, toerana nipetrahan’ny kaonsily amerikanina voalohany.